Iimpazamo eziqhelekileyo zoPhuculo loMxholo ngeWordPress | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 28, 2014 Lwesine, Okthobha 29, 2020 Douglas Karr
Imfuno yophuhliso lwe-WordPress iyaqhubeka nokukhula kwaye phantse bonke abathengi bethu ngoku banendawo yeWordPress okanye ibhlog yeWordPress ebethelelwe. Yintshukumo eqinileyo- engathandwa ngumntu wonke kodwa kukho imixholo emininzi, iiplagi, kunye nenani elikhulu labaphuhlisi elinengqiqo. Ukukwazi ukuguqula ubukho bakho bewebhu ngaphandle kokulahla iqonga kunye nokuqala ngaphezulu kuyinto enkulu.
Ukuba ukhe wanendawo yeWordPress oyithiyileyo, okanye awungekhe uyenze isebenze ngendlela othanda ngayo-fumana nje isixhobo esinokukulungiselela sona. Ukuphunyezwa kweWordPress kulungile kanye njengabantu abaphuhlise umxholo kunye neeplagi.
Sibe nesidingo esikhulu kangangokuba kuye kwafuneka sibuyele kwiinkonzo nakwikontrakta eziguqula iifayile zeefotoshop zibe yimixholo, okanye sithenge imixholo kwiinkonzo zomntu wesithathu. Siyayithanda i-Themeforest ngomgangatho wayo kunye nokukhethwa kwayo (lelo likhonkco lethu lokudibana). Umgca wezantsi, awunakuze uhlele iifayile zomxholo ngaphandle kokuba wenza into enzima kumxholo. Yonke imixholo - amaphepha, izithuba, kunye neendidi, kufuneka zihlelwe ngolawulo lomxholo wakho.
Xa sinomxholo ophuhlisiweyo okanye siyothenga, nangona kunjalo, sihlala siyifumana le micimbi iqhelekileyo:
Iindidi endaweni yeentlobo zePost Post Ngamanye amaxesha iisayithi zinamacandelo ahlukeneyo- njengeeNdaba, iiNdaba zoPapasho, uLuhlu lweeMveliso, njl.njl ezisebenza kakuhle kwifomathi yesitayile sebhlog apho unephepha lesalathiso, iphepha lodidi kunye namaphepha angatshatanga ukubonisa umxholo opheleleyo. Nangona kunjalo, siyaqaphela ukuba uninzi lwabaphuhlisi bemixholo banqumleza ukukhula kunye neendidi zeekhowudi ukuze ukwazi ukusebenzisa ibhlog yakho ukuthumela lo mxholo. Olu luphumezo oloyikisayo kwaye aluthathi ncedo kwiNdidi yeNdawo yePosi yeWordPress. Kananjalo, ukuba uphinde uhlengahlengise iindidi zakho-uyatyhafiswa kuba umxholo uhlala ubhalwe iikhowudi. Sihlala singena, siphuhlise iintlobo zeposi zesiko, emva koko sisebenzise iplagi ukuguqula udidi lwezithuba kuhlobo lwesithuba seposi.
Amasimi aSiko ngaphandle kwePlagi yamasimi aPhambili -Ndimangalisiwe ngokwenene ukuba iiNdawo eziPhambili zeSiko azithengwanga yiWordPress kwaye zahlanganiswa kwimveliso ephambili. Ukuba unezithuba ezifuna ulwazi olongezelelekileyo- njengevidiyo, idilesi, imephu, iframe, okanye enye inkcukacha, i-ACF ikuvumela ukuba wenze inkqubo yokungena kwezi zinto ngamandla kumxholo wakho kwaye uzenze zifuneke, zisilele, okanye zikhethwe . I-ACF kufuneka ibenayo kwaye kufuneka isetyenziswe endaweni yeMihlaba yesiqhelo ngenxa yolawulo olunika umxholo wakho. Ngaba ufuna ividiyo efakwe kwiphepha lasekhaya? Yongeza ifildi yesiko ebonisa kuphela kwibhokisi ye-meta kumhleli wephepha lakho lasekhaya.
Ulwakhiwo lomxholo -IWordPress ine-theme yomhleli osisiseko ekufuneka siyisebenzise ngamanye amaxesha xa abathengi bengasiniki ukufikelela kwe-FTP / SFTP ukuhlela iifayile. Akukho nto iphazamisayo njengokuthenga umxholo kwaye ungenayo indlela yokuhlela izitayile, i-header, okanye i-footer kuba bahambisa iifayile kwifolda. Shiya iifayile kwingcambu yolawulo lomxholo! Ngaphandle kokuba ufake esinye isikhokelo, akukho sidingo sazo zonke izakhiwo zolawulo. Akufani nokuba uza kuba namakhulu eefayile kwifolda yomxholo ongafumaniyo.
Iibhola ezisecaleni kunye neewijethi -Ukungabinayo imivalo esecaleni yokubandakanya iiwijethi kumxholo wakho kuyacaphukisa… kwaye ukusebenzisa kakhulu iibar ezisecaleni kunye neewijethi kwizinto ezinokuthi zibe lukhetho olulula nako kuyacaphukisa. Ibha yecala kufuneka ilinganiselwe kumxholo ongashukumiyo kuzo zonke iindidi zamaphepha emixholo yakho kodwa zihlaziywa ngamaxesha athile. Inokuba yiCall-to-Action kwicala lomxholo wakho. Okanye inokuba sisibhengezo onqwenela ukusibonisa emva komxholo. Kodwa ayisiyindawo esecaleni kunye newijethi ukubonisa inombolo yefowuni, umzekelo.
Izinketho ezinekhowudi enzima Unxibelelwano lwasentlalweni, imifanekiso, iividiyo, kunye nayo yonke into kufuneka yakhelwe kwimixholo enokuthi itshintshwe ngokulula. Akukho nto inokuba mandundu njengokuya kwiifayile zomxholo osisiseko ukongeza ikhonkco lenkangeleko yentlalo kwiindawo ezili-10 ezahlukeneyo. Yongeza iphepha lokukhetha (i-ACF ine-add-on) kwaye ubeke zonke iisetingi apho ukuze abantu bakho bezentengiso bakwazi ukuzongeza ngokulula okanye bazitshintshe xa usenza umxholo kunye nokuhamba.
Uluhlu lweekhonkco ziiMenu I-WordPress ibikade inecandelo lokudibanisa kwaye ekugqibeleni bayisusa kuba iimenyu beziyindlela efanelekileyo yokuphumeza uluhlu lweekhonkco kwizixhobo zangaphakathi okanye zangaphandle. Sihlala sibona imenyu enye icwangciswe kwiindawo ezininzi kwindawo, okanye sibona uluhlu oluboniswe kwibhanti yebar esecaleni. Ukuba uluhlu luyindawo esisigxina kwaye ethe tye, nkqo, okanye ngokulandelelana… lixesha lemenyu.
Isalathiso xa kuthelekiswa nephepha elingaphambili Iphepha lesalathiso kufuneka ligcinelwe ibhlog yakho kwaye lidwelise iiposti ozivelisayo. Ukuba unqwenela ukuba nekhasi lasekhaya eliqhelekileyo elingezizo iiposti zebhlog, kuya kufuneka ubandakanye Ifayile yetemplate yePhepha langaphambili kumxholo wakho. Ezolawulo> Useto lokufunda ngaphakathi kweWindowsPress likuvumela ukuba usete eliphi iphepha onqwenela ukuba nalo njengephepha lakho langaphambili kunye neliphi iphepha onqwenela ukuba nalo njengebhlog yakho yephepha… zisebenzise!
noluphendulayo - Wonke umxholo kufuneka ube phendula kubude obahlukeneyo kunye nobubanzi be-plethora yeendawo zokujonga Abantu basebenzisa izixhobo eziphathwayo, iipilisi, iilaptops, kunye nemiboniso emikhulu. Ukuba umxholo wakho awuphenduli, uyazenzakalisa ngokunganiki amava afanelekileyo kwisixhobo esisetyenzisiweyo. Kwaye usenokude uzenzakalise ngokungafumani ukukhangela okuhambayo kwindawo yakho.
Olunye uqheliselo olukhulu esiqala ukulubona ngabaphuhlisi bemixholo kunye nabathengisi bemixholo kubandakanya nefayile yokungenisa yeWordPress ukuze indawo isebenze ngokuchanekileyo njengoko ibonakala xa uyithengile- kwaye ungangena ngaphakathi kwaye uhlele umxholo . Ukuthenga kunye nokufaka umxholo-emva koko ujonge iphepha elingenanto ngaphandle kwezinto ezintle kunye neempawu ezibonakalisiweyo zoyilo lomxholo ziyonyusa. Ijika lokufunda lahlukile kwimixholo entsonkothileyo kunye nabaphuhlisi bahlala bephumeza amanqaku ngokwahlukileyo. Amaxwebhu amakhulu kunye nesiqulatho sokuqala yindlela elungileyo yokunceda abathengi bakho baphume.
tags: izinto ezilungileyoiindidiimihlaba yesikoIintlobo zeposi yesikoUphuhliso lomxholoiimpazamo zomxholoumxholo wegama
Juni 29, 2014 ngo-10: 55 AM
Esinye isithuba esihle uDoug! Enkosi ngokwabelana, bendifunde kakhulu! ..